Lwesithathu 19 Meyi 2021
Incwajana ・ INissan ihlanganise bonke ubuchwepheshe bayo besifundazwe nobuhlakani, izinto zangaphakathi zekhwalithi enhle kakhulu nobuciko bobuciko baseJapan ("MONOZUKURI" ngesiJapan) ukudala i-sedan yokunethezeka yekhwalithi engenakuqhathaniswa - i-CIMA entsha, ifulege lakwaNissan elilodwa. Le ncwajana yakhelwe ukungakhombisi kuphela umkhiqizo womkhiqizo we-CIMA, kepha futhi ukuthola ukuzethemba nokuziqhenya kwababukeli uNissan ngobuhlakani bayo.
Ukwakhiwa Kwephakeji Lokutshungatha
Lwesibili 18 Meyi 2021
Ukwakhiwa Kwephakeji Lokutshungatha Imiklamo yephakheji yezinsini. Umqondo wale miklamo "uvuselela uzwela". Amanani entengo yemikhiqizo angabesilisa abangamashumi amabili abo, futhi leyo miklamo emisha ibasiza ukuba bathathe imikhiqizo ezitolo ngokwemvelo. Izibukeli eziphambili ziveza umbono omangalisayo womhlaba wento yemvelo ehambisana nokunambitheka ngakunye. I-THUNDER SPARK yokuthola i-flavute ne-electrifying flavour, SNOW STORM yokuqandisa futhi ukunambitheka okuqinile kokupholisa, bese UTHOLA ISIBONELELO ukunambitheka komswakama, namanzi futhi kunamanzi.
Msombuluko 17 Meyi 2021
Uhlaka I-Or2 iyisakhiwo sophahla esisodwa esivumelana nokukhanya kwelanga. Izingxenye zemvelo ze-polygonal zingaphezulu kokukhanya kwe-ultra-violet, zibeka ibala isikhundla nobungako bemisebe yelanga. Lapho kusisithunzi, izingxenye ze-Or2 zimhlophe ngokweqile. Kodwa-ke uma ishayelwa yilanga yilapho iba imibala, igcwalise isikhala ngezansi ngemibala ehlukahlukene yokukhanya. Emini i-Or2 iba yithuluzi eline-shading elawula kuphela isikhala ngaphansi kwaso. Ngobusuku i-Or2 iguquka ibe yi-chandelier enkulu, isabalalisa ukukhanya okuqoqwe ngamaseli ahlanganisiwe we-photovoltaic phakathi nosuku.
Ilebula Le-Sparkling Le-Pack Kanye
Sonto 16 Meyi 2021
Ilebula Le-Sparkling Le-Pack Kanye Njengoba nje uLwandle lwe-Iseo luhlakazeka osebeni lweFracacorta, kanjalo newayini elikhazimulayo lithela izinhlangothi zengilazi. Umqondo ukucaciswa kabusha kwesimo sedatha futhi uveze wonke amandla ebhodlela lase-Reserve elithululelwa engilazini yekristalu. Ilebula enhle nenobuhle, enokulingana kwimidwebo yayo nemibala, yisixazululo esinesibindi esine-polypropylene esobala nokuphrinta kwegolide le-foil okushisayo ngokuphelele ukunikeza imizwa emisha. Ukuthululwa kwewayini kugcizelelwa ebhokisini, lapho imidwebo igoqa khona konke okuhlanganisiwe kwiphakethe: ilula futhi inomthelela owakhiwa yizakhi ezimbili "zesilayidi et hloir".
Ubunikazi Obukwayo ILe Coffret ingumbhede oklanyayo wombhede kanye nokudla kwasekuseni enhliziyweni yeValle d'Aosta. Le phrojekthi yaqanjwa ngokuqondene ngokuphelele nesitayela esiyiqiniso: ngakho-ke izindonga zamatshe, imishayo yokhuni nefenisha yasendulo. Umbuthano ofanekisela isibhakabhaka ngaphezulu konxantathu omelele intaba, lapho iB & B itholakala khona, kusukela emcabangweni wokukhuphuka komuntu esibhakabhakeni. Ifonti ye-Onciale ibuyekezwe enguqulweni yesimanje ukukhumbula umsuka weCeltic weSigodi ngokufanele futhi isekela uphawu oluqinile nolubalulekile ekugcineni lokuthola ilogo okulula ukulibona futhi libambe iso kalula.
Ubuciko Bokumboza I-Albhamu
Ubuciko Bokumboza I-Albhamu IHaezer iyaziwa ngomsindo wayo oqinile we-bass, break epic nemiphumela emihle eyenziwe kahle. Uhlobo lwayo lomsindo ophuma nje njengomculo wokudansa oqonde phambili, kepha uma usuhlola noma ulalele, uzoqala ukuthola izingqimba eziningi zokujikeleza ngaphakathi komkhiqizo osuqediwe. Ngomqondo wokudala nokwenza lokhu inselelo bekungalingisa isipiliyoni somsindo owaziwa ngeHaezer. Isitayela sobuciko asisona nhlobo isitayela somculo wokudansa esijwayelekile, okwenza u-Haezer abe uhlobo lwakhe.
Osoro Uhlelo Lokuvula I-Tableware Mgqibelo 12 Juni
Coca-Cola Tet 2014 Ukufakwa Kwesiphuzo Esithambile Lwesihlanu 11 Juni
5 Elemente Ilebula Le Wayini Lwesine 10 Juni
Incwajana Ukwakhiwa Kwephakeji Lokutshungatha Uhlaka Ilebula Le-Sparkling Le-Pack Kanye Ubunikazi Obukwayo Ubuciko Bokumboza I-Albhamu